महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा ९४ प्रतिशतले बढ्यो
२०७४ साउन २७ गते ९:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । महालक्ष्मी विसका बैंकको नाफा ९४ दशमलब ४४ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिक अवधीमा आफ्नो नाफा ३४ करोडले बढाएर ७० करोड पुर्याएको हो । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासिक...
बैंक अफ काठमाण्डूको नाफा ८९ प्रतिशतले वृद्धि
२०७४ साउन २७ गते ९:११ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डुको नाफा ८९ दशमलब २३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको भन्दा ५८ करोडले नाफा वृद्धि गर्दै बैंक अर्ब कमाउने सूचिमा समेत प्रवेश गरेको छ । बैंक अफ काठमाण्डुले गत...
नेपाल एसबिआई बैंकको नाफा डेढ अर्ब नाघ्यो
२०७४ साउन २७ गते ८:५७ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको नाफा डेढ अर्ब नाघेको छ । अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार बैंकले गत आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ५२ करोड नाफा कमाउन सफल भएको हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही...
मेगा बैंकले बढायो साढे ४३ प्रतिशतले नाफा, बैंकले कमायो ७९ करोड
२०७४ साउन २७ गते ८:५६ विकासन्युज
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गत वर्ष साढे ४३ प्रतिशतले नाफा बढाउन सफल भएको छ । यो बैंकले गत वर्ष अघि ७९ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा अघिल्लो...
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नाफामा झिनो अंकले बृद्धि, एक अर्ब २० करोड नाफा कमायो
२०७४ साउन २७ गते ८:३२ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नाफामा गत वर्ष झिनो अंकमा मात्रै बृद्धि भएको छ । यो बैंकले गरेको नाफा १ अर्ब २० करोड भएपनि यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ...
सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शम्भुनाथ गौतम नियुक्त
२०७४ साउन २६ गते १२:४९ विकासन्युज
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मा शम्भुनाथ गौतम नियुक्त भएका छन् । गत साउन २५ गते बसको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गौतमलाई ४ वर्षे कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने...
हाम्रो विकास बैंकले बढायो १४ प्रतिशतले नाफा, बैंकले कमायो ४ करोड ३५ लाख
२०७४ साउन २६ गते ८:१३ विकासन्युज
काठमाडौं । नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको हाम्रो विकास बैंकले गत वर्ष १४ दशमलव ७७ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो बैंकले गत वर्ष ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नफा कमाएको हो । यस्तो...
एनआईसी एशियाद्धारा बाजुराको मार्तडीमा पहिलो निजी वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा
२०७४ साउन २५ गते १८:३८ विकासन्युज
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा पहिलो निजी वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ग्रामिण तथा दुर्गम जिल्लाहरुमा आफ्ना शाखा कार्यालयहरु बिस्तार गर्ने क्रमसंगै यु. के. एड एक्सेस टु...
प्रभु बैंकद्धारा हज यात्रुहरुलाई डलर/साउदी रियाल सटही सुविधा
२०७४ साउन २५ गते १८:०० विकासन्युज
काठमाडौं । प्रभु बैंकले २०७४ सालको हजयात्राका लागि जाने १,२५० जना नेपाली हजयात्रीहरुलाई डलर/साउदी रियाल सटही सुविधा उपलब्ध गराएको छ । बैंकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त गरी प्रति हजयात्री १,७०० अमेरीकी डलर...
सिटिजन्स बैंकले सुरु गर्यो निः शुल्क अनलाइन आस्बा सेवा
२०७४ साउन २५ गते १७:४३ विकासन्युज
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले धितोपत्रको दरखास्त लिने प्रकृयालाई अझ सरल, प्रभावकारी एवं सहज बनाउन अनलाइन मार्फत दरखास्त दिन सकिने सेवा सुरु गरेको छ । यस सेवा अन्तर्गत आगामी दिनहरुमा निष्काशन हुने आइपीओ,...
कृषि विकास बैंकको नाफा १२ प्रतिशतले बढ्यो, बैंकले कमायो २ अर्ब ७७ करोड
२०७४ साउन २५ गते ८:०२ विकासन्युज
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले गत आवमा २ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा गरको छ । बैैंकको यो नाफा गत वर्ष १२ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ४६...
४२ लाख घाटामा रहेको साझा विकास बैैंकले गर्यो डेढ करोड नाफा
२०७४ साउन २४ गते ८:३४ विकासन्युज
काठमाडौं । सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ करोड ५७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष ४२ लाख ३४ हजार घाटामा रहेको यो बैंकले एकै...
समस्याग्रस्त ९ वित्तीय संस्था ब्युँतिँदै, ३ वटा संचालनमा आए ६ वटा प्रक्रियामा
२०७४ साउन २४ गते ७:५७ विकासन्युज
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकबाट हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ संस्थामध्ये ९ वटा ब्युँतिने भएका छन् । समस्याग्रस्त फुकुवा भई सञ्चालनमा आएका र फुकुवाको प्रक्रियामा रहेकासहित कम्तीमा नौवटा ब्युँतिने भएका हुन् । हालसम्म ३ वटा...
लुम्बिनी विकास बैंकले बढायो १७ प्रतिशतले नाफा, बैंकको नाफा ३७ करोड
२०७४ साउन २३ गते ९:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले गत आवमा १७ प्रतिशतले नाफा बढाउँदै ३७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कमाएकाे छ । यसको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ करोड ५५ लाखले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो...
कैलाश विकास बैंकको नाफा ५१ प्रतिशतले बृद्धि, बैंकले कमायो ५० करोड २६ लाख
२०७४ साउन २३ गते ९:१२ विकासन्युज
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंकले गत आवमा ५१ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो बैंकले गत वर्ष ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामाा १६ करोड ९७...
सिन्धु विकास बैंकले कमायो ३ करोड नाफा, ३६ प्रतिशतले वृद्धि
२०७४ साउन २३ गते ८:५० विकासन्युज
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकले गत आवमा ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैंकले अघिल्लो वर्ष २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यो बैैंकको यस्तो नाफा गत...
लक्ष्मी बैंकले ४८ प्रतिशतले नाफा बढायो, अर्ब नाफा गर्ने सूचीमा पर्यो
२०७४ साउन २३ गते ८:३१ विकासन्युज
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले ४८ प्रतिशतले नाफा बढेको छ । यो बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा आफ्नो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढाएको छ । यो बैैंकले गरेको नाफा...
एनआइसी एशिया बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन आस्वा सेवा, अब सेयर भर्न बैंक जानु नपर्ने
२०७४ साउन २२ गते १७:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले आइतबारदेखि अनलाइन आस्वा सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले आफ्नो २०औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई यो सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरुले यस बैंकको...
माछापुच्छ्रे बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा स्थानान्तरण
२०७४ साउन २२ गते १७:१० विकासन्युज
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ मा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले पोखरामा रहेको केन्द्रीय कार्यालय आइतबार काठमाडौंमा स्तानान्तरण गरेको हो । हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नयाँबजार, पोखरा र...
देवः विकास बैंकको नाफा ११५ प्रतिशतले बढ्यो
२०७४ साउन २२ गते ९:२८ विकासन्युज
काठमाडौं । देवः विकास बैंकको नाफा ११५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा आफ्नो नाफा ११५ दशमलब ३८ प्रतिशतले बढाएर २८ करोड पुर्याएको हो । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा बैंकले १३...
« अघिल्ला 1 … 252 253 254 255 256 … 311 पछिल्ला »